Etu esi akpọ oku vidiyo na Firefox | Akụkọ akụrụngwa
N’oge na-adịghị anya, anyị ga - enwe ike ịkpọ oku vidiyo na - enweghị ihe ọ bụla na - eji naanị ihe nchọgharị Mozilla, ihe ị ga - enwe na nsụgharị ọzọ nke a ga - ewepụta n’isi nso
Anyị na-ezo aka na Firefox 33, nke ga-etinye mgbakwunye pụrụ iche na mpaghara ebe plugins ma ọ bụ ndọtị anyị na-eji kwa ụbọchị maka otu ọrụ dị ebe niile; n'ihi na ihe ohuru a gha eme ka amara niru ya, Taa, anyị chọrọ ịkwadebe ụzọ maka gị ka ị wee mara ihe ị ga-eme, ozugbo a chọrọ iwu a.
1 Video oku ka si Mozilla Firefox
1.1 1. kpọ enyi gị ka o sonye na vidiyo
1.2 2. Renata ọkpụkpọ òkù isonye na ọkpụkpọ vidiyo
Video oku ka si Mozilla Firefox
Ihe mbu anyi aghaghi ighota bu na odi uzo abuo iche eji eji oru ohuru a; Otu onye na-ezo aka na onye a ga-akpọ onye ọzọ ka ọ bịa kwuo okwu; nke abụọ ikpe emee kama mgbe anyị bụ ndị ọbịa isonye kwuru kwuru. Maka otu n'ime nhọrọ abụọ ị ga - eme ịmara otu esi ahọrọ usoro ziri ezi iji mata otu esi arụ ọrụ ọhụrụ a Firefox.
1. kpọ enyi gị ka o sonye na vidiyo
Ọ bụrụ n’ịchọrọ isonye na mmemme a na ọrụ ọhụrụ nke Mozilla na-enye gị na Firefox 33, anyị na-akpọ gị oku ka ị budata beta mbipụta, ọ bụ ezie na ọ kachasị mma ichere ka mbipụta anụ kwụsiri ike. Anyway ma oburu na i gbara ume budata ụdị beta nke Firefox 33, ozugbo ịmalite ihe nchọgharị ahụ ị ga-ahụ akara ngosi ọzọ na aka nri aka nri, ya bụ, ebe ha na-adịkarị ndị niile tinye-ons ma ọ bụ ndọtị na anyị na-eji maka otu ọrụ.
Na-eche na nke mbụ ahụ anyị tụrụ aro n'elu, anyị ga-enwe naanị họrọ akara ngosi ekwentị ịkpọ otu enyi ka anyị na ya kparịta ụka; n'oge ahụ URL ga-apụta, nke anyị ga-edepụta ka anyị wee nwee ike ịkekọrịta ya na onye ọ bụla anyị chọrọ ịgwa, ihe anyị nwere ike ịme nke ọma site na ozi email.
Ọ ga-adaba adaba na iji usoro oku vidiyo a enwere ụfọdụ ndị ahịa ma ọ bụ zuo ezu iji gwa anyị banyere ọbịbịa nke ozi ọhụrụ ahụ zipu igbe mbata, ihe yiri nnọọ ihe ị na-eme Ihe ngosi Gmail. Ọfọn, ozugbo enyi anyị na-enweta njikọ kwuru wee pịa na ya, windo ọhụrụ ga-apụta n'akụkụ anyị, nke aga-agwa anyị na onwere "oku na-abata". N'ebe ahụ, anyị ga-enwe nhọrọ ịhọrọ nke ọ bụla n'ime bọtịnụ abụọ egosiri na windo, nke ga-enyere anyị aka ịjụ oku (bọtịnụ uhie) ma ọ bụ ịza ya (bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ).
Optionsfọdụ nhọrọ ndị ọzọ ga - apụta na ogwe nhọrọ nke ihe nchọgharị Firefox 33, nke ga - enyere anyị aka imechi igwe okwu ma ọ bụ igwefoto ahụ, enwekwara ike ịkwụgbu ya iji mechaa ya n'oge ahụ.
2. Renata ọkpụkpọ òkù isonye na ọkpụkpọ vidiyo
Ihe nke abuo anyi turu aro site na mbido bu nke a, ya bu, a kporo anyi ka anyi sonye na oku vidiyo site na njikọ, nke anyi ga enweta site na email. Mgbe anyị pịa njikọ ahụ obere windo ga-apụta nke ga - atụ aro «ịmalite oku vidiyo ma ọ bụ mkparịta ụka olu ».
Akara ngosi ndị ọzọ nke anyị tụrụ aro n'elu ga-apụta n'oge a, ya bụ, anyị ga-enwekwa ohere kamera ogbi, igwe okwu ma ọ bụ nanị dochie oku ahụ mgbe ọ gwụchara.
Okwesiri ikwuputa na n'ime usoro nhazi izizi, Firefox 33 ga-ajụ anyị maka ikike iji rụọ ọrụ ma jiri ụfọdụ akụ na kọmputa anyị, nke pụtara na ihe nchọgharị ahụ ga - enwe ihe ùgwù iji rụọ ọrụ kamera yana igwe okwu. Maka mmadụ abụọ nwere ike isonye na ọkpụkpọ vidiyo, achọrọ ka ha abụọ nwee otu ụdị ihe nchọgharị Internetntanetị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Otu esi eme oku vidiyo site na Mozilla Firefox